आइपीएलः मलिंगा टिममा, अरु को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः मलिंगा टिममा, अरु को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, चैत १४ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत मुम्बई इन्डियन्स विरुद्धको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरले टस जितेर बलिङ रोजेको छ । खेल नेपाली समयअनुसार बैंग्लोरमा साँझ ८ः१५ बजेदेखि शुरु हुँदैछ ।
यी दुवै टिम पहिलो जितको खोजीमा आज मैदान उत्रिएका छन् । पहिलो खेलमा बैंग्लोरले चेन्नई र मुम्बईले दिल्लीसँग हार बेहोरेको थियो ।
आजको खेलमा विराटको टिमले चेन्नई विरुद्ध खेलेको टोलीलाई नै मैदान उतारेको छ । यता, मुम्बईले भने २ खेलाडी परिवर्तन गरेको छ । उसले बेन कटिङ र रासिख सलामलाई विश्राम दिएको छ । उनीहरुको स्थानमा मयंक मार्कडे र लसिथ मलिंगालाई मौका दिइएको छ । यस्तो छ दुवै टिम–
ट्याग्स: IPL, Malinga, MI Vs RCB